Ike draịva a esighị ngwaọrụ. Ọ bụ ezie na ha na-egosi dị ka siri ike ngwaike ngwaọrụ, a obere akpachapụghị anya nwere ike ime ka a na diski ike ka malfunction ma ọ bụ njọ, kwụsị ịrụ ọrụ kpam kpam. Mgbe ihe mere data ọnwụ na ike draịva na-akasị ndị ahụ, mgbe ụfọdụ, ha na-ruru ka a mmadụ nkịtị njehie. Ka ihe atụ, formatting a ike mbanye na-enweghị a ndabere pụrụ ịkpata ọnwụ nke dị oké ọnụ ahịa data anakọtara n'elu N'ezie nke afọ. Na-abawanye na digitization nke data, n'ụzọ nkịtị niile anyị na-echeta, anyị mkpa ozi ịntanetị na niile onye ozi na-echekwara na anyị ike draịva, ya mere, otú ahụ a format nwere ike ịbụ unaffordable karịsịa mgbe ị na-amaghị otú na-niile na data azụ.
Bụ Data ka recoverable mgbe formatting a Ike mbanye?
Ee, data recoverable mgbe formatting a ike mbanye. Nke a bụ n'ihi na ihe mere na sistemụ, ndabara adịghị hichapụ ihe niile ọrụ ehichapụ faịlụ nwa oge. Kama nke ahụ, ndị a faịlụ na-nọ na ruo oge ụfọdụ ma na-ehichapụ Ozugbo sistem kwesịrị na-eme ka ohere maka nso nso karịa ehichapụ faịlụ. Tupu mgbe ahụ, ndị a faịlụ anọ na ebe nchekwa na ike-natara eji ihe ọ bụla data mgbake ngwá ọrụ. Ya mere, ọ bụrụ na i accidently formatted a ike mbanye, i nwere ụfọdụ oge idozi ihe. Nagide a oge iji nweta aka gị na otu oru oma data mgbake ngwá ọrụ dị ka Wondershare Data Recovery software iji nyere gị na usoro.
Ihe na-eme tupu agbake a formatted Ike mbanye?
E nwere ihe ụfọdụ na-kwesịrị nọ n'uche ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji naghachi data si a formatted ike mbanye. Isiokwu a na-emesi ike na niile dos na don'ts dị ka ịga nke ọma nke data nlaghachie na-adabere na ndị a dị mfe anya. Ya mere, na-agbake data si a formatted ike mbanye, ị ga-mkpa ime esonụ ihe:
Na-elekọta ka bụghị ihe ọ bụla na draịvụ ike na ị chọrọ agbake faịlụ site na. Nke a bụ iji jide n'aka na sistemụ adịghị ihichapụ ehichapụ faịlụ-adịgide adịgide.
Get a jide a data mgbake software. E nwere ọtụtụ ezi nhọrọ dị na ahịa ma anyị ike ikwu iji Wondershare Data Recovery software esighịkwa ya dịgasị iche iche nke ndakọrịta na-akwado ụdị faịlụ.
Olee otú naghachi formatted ike mbanye?
Wondershare Data Recovery Bụ a bara uru data mgbake ngwá ọrụ maka ma beginners na ahụmahụ ọrụ. Dị ka aha na-egosi, Wondershare Data Iweghachite nwere ike inyere ọrụ weghachite furu efu data ma ọ bụ faịlụ. Ọ nwere ike na naghachi faịlụ na anọwo na-ehichapụ accidently ma ọ bụ ndị na e furu efu ruru ka formatting nke a na diski ike. Ọzọkwa, ọ pụrụ naghachi faịlụ ahụ nwere ike anọwo na-ehichapụ ruru nje. Wondershare Data Naghachi-enye nkwado maka ihe karịrị 550 faịlụ na ụdị nke na-eme ya a kemfe data mgbake ngwá ọrụ. Wondershare Data Recovery Nwere ike ibudata site http://www.wondershare.com/data-recovery/.
Download na wụnye Wondershare Data Recovery software na gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Ẹkedori Wondershare Data Recovery ozugbo echichi zuru ezu. Ị ga-akpaghị aka ga-zijere Ọkachamara mode nke ọbụna-ahapụ gị ịhọrọ ụdị data na ị chọrọ iji naghachi. Họrọ ụdị faịlụ na ị chọrọ iji naghachi dị ka gị mkpa. Ọ bụrụ na ọ dị, gị mkpa nile di iche iche nke data natara, nanị họrọ "All File iche" na kụrụ "Ekem".
Wondershare Data Recovery Ga ugbu a na-ajụ gị maka ebe ebe data pụrụ ịbụ na n'ihu gị ehichapụ / furu efu ya. Họrọ adabara nhọrọ si ndepụta nke nyere ndị ma ọ bụ nanị họrọ "m ike icheta" ma ọ bụrụ na ị maghị banyere ọnọdụ. Pịa "Ekem" n'ihu.
Ọzọ, Wondershare Data Recovery ga-arịọ gị iji họrọ a Doppler ụdị dabeere na mmasị gị. Họrọ "Kwado Deep iṅomi" dị ka ọ na naputa faịlụ furu efu ruru format ọzọ rụọ ọrụ nke ọma. Nke a Doppler nwere ike iri oge ụfọdụ, n'ihi ya, anaghị masịrị ya. Nọdụ ala azụ, zuru ike na ka Wondershare Data Recovery eme ya anwansi.
Mgbe Wondershare Data Recovery a mere ịgụ isiokwu draịvụ ike gị furu efu faịlụ, ọ ga-ịhụchalụ niile results maka gị. Ị nwere ike mgbe ahụ họrọ chọrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi na iwepu mkpa maka ewepụta a nnukwu ego nke na-achọghị data. Nanị họrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi na kụrụ "Naghachi".
Ụzọ ziri ezi usoro a ike mbanye
E nwere nanị ụzọ ziri ezi isi Ọkpụkpọ a ike mbanye; ihe niile ị na-eme iji jide n'aka na formatting a mere ziri ezi, na ị na-adịghị ida ọ bụla data, mgbe nile na-eji a ndabere ngwá ọrụ ndabere niile nke gị data na mpụga ike mbanye tupu formatting draịvụ ike gị. Otú a niile nke gị data ga-anọgide nchebe na ị ga-enweghị na-aga site nsogbu nke na-agbake ya e mesịa.
> Resource> Draịvụ> Olee naghachi faịlụ site na a formatted Draịvụ?